linoo-ayar: လခစား ြပည်ပ မီဒီယာြကီးများ အချုိ့ စည်းမရှိမှု
လခစား ြပည်ပ မီဒီယာြကီးများ အချုိ့ စည်းမရှိမှု
By သစၥာ | သ​စ္စာ on 9:58 AM သတင်းများ
ယခုတေလာ ြပည်တွင်းြပည်ပမှ ြမန်မာနိုင်ငံသားများ အထူးစိတ်ဝင်စား ေနေသာ လူထုေခါင်းေဆာင် ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်အား စစ်အစိုးရမှ မတရား အမှုဆင် ဖမ်းဆီးမှု၏ သတင်း ေရးသားပံုများတွင် ြပည်ပ မီဒီယာများသည် ေသချာေလ့လာ ဆန်းစစ်ြခင်း မရှိပဲ ရမ်းသမ်း သတင်းေရးသားြခင်းအေပါ် အွန်လိုင်း စာဖတ်ပရိသတ်များ အလွန်အမင်း စိတ်ပျက်ြခင်းများ ြဖစ်ေပါ် ေနရသည်။
အဆိုးဝါးဆံုး ြဖစ်ရပ်မှာ မီဒီယာြကီးများ၏ ငါ့ြမင်းငါစိုင်း ေရးသားမှုများေြကာင့် ပုဂ္ဂလိက ထိခိုက်နှစ်နာမှုများ ရှိေြကာင်း သတင်းသမား ဘေလာ့ဂ်ဂါ တဦးြဖစ်သူ မခွာညို မှ သူမ၏ ငှက်ကေလး အမည်ရ ဘေလာ့ဂ်တွင် ေရးသားေဖါ် ြပထားသည်။ ယခင် အပတ်များကလည်း ဘေလာ့ဂ်ဂါ မဆုမွန်မှ ြပည်ပမီဒီယာများတွင် ေရးသားေနေသာ ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်အား အနီးကပ် အကူညီေပးေနေသာ ေဒါ်ခင်ခင်ဝင်းနှင့် သမီးြဖစ်သူအား အိမ်ေဖါ်ဟု သံုးနှုန်းေနမှုအေပါ် လွဲမှားေနေြကာင်း ေရးသားခဲ့ြပီး ြဖစ်ေသာ်လည်း အေတာမသတ်နိုင်ေသာ မီဒီယာတို့၏ အမှားများေြကာင့် နိုင်ငံချစ်စိတ်ြဖင့် ကူညီေနသူ ေဒါ်ခင်ခင်ဝင်း၏ မိသားစုမှာ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါ ထိပါးခံရသည်ဟု သမီးရင်း ြဖစ်သူ သတင်းသမား ဘေလာ့ဂ်ဂါ မခွာညိုမှ သူမ၏ ဘေလာ့ဂ်တွင် ေရးသား ေဖါ်ြပ ထားသည်။
သူမနှင့် အတူ သတင်းေထာက်သင်တန်း တက်ေရာက်ခဲ့သူ ဧရာဝတီ ဝဘ်ဆိုဒ် အဂင်္လိပ်စာမျက်နှာမှ သတင်းေရးသားသူ ေစာရန်နိုင်မှာ သူမ အေမအေပါ် အိမ်ေဖါ်ဟု သံုးနှုန်းေနမှု သတင်းေရးသားမှု မှားယွင်းေနေြကာင်း ၂၀၀၅ခုနှစ် ကာလ ြကာြမှင့်စွာကပင် သိရှိေနေသာ်လည်း ြပင်ဆင်ေရးသားြခင်း အလျဉ်းမရှိ ဧရာဝတီ သတင်းဋ္ဌာနမှ အယ်ဒီတာ ကိုေအာင်ေဇာ် အားလည်း ယမန်ေန့ (ေမလ ၁၅ရက်) ကပင် မခွာညိုမှ ထပ်မံ အသိေပးခဲ့ေသာ်လည်း နှစ်ဦး နှစ်ဖက်အြကား လူြကီးလူေကာင်းပီသစွာ ေတာင်းပန်အမှု ြပုခဲ့ြခင်း မရှိေပ။
ထို့အြပင် ယခင်ကလည်း ေနာ်ေဝအေြခစိုက် အသံလွှင့်မီဒီယာ ြဖစ်ေသာ ဒီဗွီဘီ မှ သတင်းေထာက် ထက်ေအာင်ေကျာ်မှ အဂင်္လိပ်လို မှားယွင်းစွာ ေရးသားမှုေြကာင့် ေဒါ်ခင်ခင်ဝင်းမှာ လင်ငယ် ရှိေနသေယာင်ေယာင် ြဖစ်သွားရြပီး သတင်းေထာက် ဘေလာ့ဂ်ဂါ မခွာညို၏ ညီမ ြဖစ်သူ မဝင်းမမ အား လင်ပါသမီး ြဖစ်သေယာင်ေယာင် ေရးသားခဲ့သည်ကို မီဒီယာြကီး ြဖစ်ေသာ်လည်း ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့် မညီညွတ်ဟု မခွာညိုမှ မှတ်တမ်းြပုထားသည်ဟု သူမ၏ ဘေလာ့ဂ်တွင် ေဖါ်ြပထားသည်။
ဟစ်တိုင် ဝဘ်ဆိုဒ်၏ ဝဘ်မာစတာ ကိုဂျင်မီမှ “ ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်အား နိုင်ငံေရး အသိစိတ်ြဖင့် ကူညီေနသူ ေဒါ်ခင်ခင်ဝင်းအား ဒီမိုကေရစီကို တကယ်တမ်းလိုက်နာ ကျင့်သံုးေနပါေသာ မီဒီီယာြကီးများမှာ အမှားသိလျက်နှင့် ယခုလို ချုိးချုိးဖဲ့ဖဲ့ မေြပာဆိုသင့်ေြကာင်း ” လူထုအသံအား ေထာက်ြပ ေြပာဆိုလိုက်သည်။
ဘေလာ့ဂ်ဂါ ကုိလွင်ေအာင်စုိး ကေတာ့ ¨ It isareminder for all Burmese media. Media freedom should be democratic.¨လို့ မှတ်ချက်ြပုြပီး။ ဘေလာ့ဂ်ဂါ မိုးြမင့်ေအာင်မှ မှတ်ချက်ေပးသည်မှာ “ ထင်ရှားေသာ ဘေလာ့ဂ်များတွင် ဒီအေြကာင်းများ ေဖါ်ြပြပီး ြဖစ်ေသာ်လည်း ယခုကဲ့သို့ ဝန်ခံြခင်း မြပုြခင်းဟာ ငါ့မှာတုတ်ရှိတယ် ငါရိုက်ချင်တာ ရိုက်မယ်လို့ အဓိပ္ပါယ် သက်ေရာက်ေစြခင်း အလို့ငှါ ထိုမီဒီယာများဟာ စာဖတ်ပရိသတ်အား ေစာ်ကားရာကျလွန်းသည် ” ဟု ထင်ြမင်ချက်ေပး၍ စာေရးဆရာမ ေမြငိမ်း ကမူ မခွာညို၏ ငှက်ကေလး ဘေလာ့ဂ်တွင် ေရးသားထားေသာ “ ရှင်တုိ့ အမှားေတွအတွက် ကျမကပဲ တရား၀င် ေတာင်းပန်ပါတယ် ” ပို့(စ်)တွင် ယမန်ေန့က ကွန်မန့်ချထားသည်မှာ “ ခက်တာက အဲလိုလူေတွက ဘေလာ့ဂ်မေြပာနဲ့ စာေတာင်မှ မဖတ်တာပဲ.. ဒီေတာ့ ဒါကို ေသချာ ထိပ်တိုက်ေြပာမှ ရေတာ့မယ် ထင်တယ်။ ဒါမှ ြပီးမှာပဲ။ ” ဟု ေရးသားထားသည်ကို ေတွ့ရှိရသည်။
12 Response to 'လခစား ြပည်ပ မီဒီယာြကီးများ အချုိ့ စည်းမရှိမှု'
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/05/blog-post_16.html?showComment=1242560443886#c3192616304691799495'> May 17, 2009 at 4:40 AM
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/05/blog-post_16.html?showComment=1242569867554#c2853903895190306158'> May 17, 2009 at 7:17 AM
ဖတ်ရှုြပီး မှာယွင်းေသာသတင်းသမားများကို စိတ်ဆိုးရပါတယ်။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/05/blog-post_16.html?showComment=1242639138592#c1611653494499495998'> May 18, 2009 at 2:32 AM
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/05/blog-post_16.html?showComment=1242697409798#c1973606913550824523'> May 18, 2009 at 6:43 PM
စာဖတ်သွားပါတယ်.. သတင်းေတွ ထဲက အမှားေတွက ေတာ်ေတာ် ဆိုးရွားတယ်
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/05/blog-post_16.html?showComment=1242789101429#c2999264479704665236'> May 19, 2009 at 8:11 PM
သတင်းေလာကမှာ သူတို့ချင်းချင်းကို မညီညွတ်ြကပါလားလို့ ခံစားရသဗျာ။
ဒါက ေကာင်းတဲ့နမိတ်ေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/05/blog-post_16.html?showComment=1242830595898#c8449780781314889990'> May 20, 2009 at 7:43 AM
အများနဲ့ ပတ်သတ်ေနေတာ့ အမှားကင်းနုိင်သေလာက် ကင်းေအာင် ြကိုးစားသင့်တာေနာ် ..
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/05/blog-post_16.html?showComment=1242912526286#c7259502292949523877'> May 21, 2009 at 6:28 AM
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/05/blog-post_16.html?showComment=1242979569265#c1425566003573177043'> May 22, 2009 at 1:06 AM
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/05/blog-post_16.html?showComment=1243075639433#c5077737118834216244'> May 23, 2009 at 3:47 AM
သူတိုေတွလွတ်လပ်စွာ ဆိုတာကို ဘာသာြပန်လွဲြပီး
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/05/blog-post_16.html?showComment=1243256127878#c6857930635077870113'> May 25, 2009 at 5:55 AM
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/05/blog-post_16.html?showComment=1243293722354#c6577608124027600625'> May 25, 2009 at 4:22 PM
မှားေနတာကို အချက်အလက် ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ ေြပာြပ ေထာက်ြပ ေနရက်နဲ့ မြပင်တာကေတာ့ ေတာ်ေတာ်ကို သတင်းသမားတေယာက်မပီသဘူးလို့ ယူဆပါတယ်..။
ေဝမှျေပးတဲ့အတွက် ေကျးဇူးပါ ကိုလင်းဦင်္း။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/05/blog-post_16.html?showComment=1244815163614#c8084151468078120339'> June 12, 2009 at 6:59 AM
HI, I THINK THAT IS NOT THEIR MISTAKE. IT IS DEPEND ON THEIR SATURATION.BUT IT IS GOOD FOR YOUR COMMENT.